Xubnaha joogtada ah ee Golaha amaanka Q/Midoobay oo maanta ku soo wajahan magaalada Muqdisho
Xubnaha joogtada ah ee golaha amaanka ee QM oo ka kooban 15 xubnood ayaa maanta la filayaa iney soo gaaraan magaalada Muqdisho.
Socdaalka maanta xubnaha golaha amaanku ku imanayaan magaalada Muqdisho ayaa qeyb ka ah booqasho ay ku kala bixinayaan dalal afrikaan ah, iyagoo horey u soo maray dalka Koonfura Suudaan.
Marka ay yimaadaan magaalada Muqdisho ayaa xubnaha golaha amaanku waxay kulamo la qaadan doonaan madaxda ugu sareysa dowlada Somalia iyo saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM, iyagoo ka dibna shir jaraa’id wada qaban doona.
Waa markii ugu horeysay taariikhda ee magaalada Muqdisho ay booqasho ku yimaadaaan xubnaha golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo marka ay ku laabtaan magaalada New York warbixin ay Somalia ku jirto ka soo saari doona booqashada ay ku mareen qaarada afrika dalal ka mid ah.
Wixii warar ah ee ku soo kordha kala soco